Soo dejisan Google+ 6.6.0.1058 – Vessoft
Soo dejisan Google+
Google+ – software ah inay ku wada xiriiraan shabakad bulsho ka adeega Google. Software ayaa u saamaxaaya in ay baadhaan dadka isticmaala iyo iyagoo aad ku dartid liiska saaxiib, files sarrifka, daabacaan photos, u aragto warka kala duwan iwm gaar ahaan ee Google+ waa is-dhexgalka u leh codsiyada kale ka adeega Google, taas oo waxaa lagu gaadhi karaa howlan la xisaabtaada. Software ayaa sidoo kale wuxuu kuu ogolaanayaa inaad u xalliso xiriirada by nooc oo kala duwan oo la helo kooxo dad ah si aad u eegto diiwaanka la daabacay. Google+ leeyahay interface fudud oo dareen leh.
Dhexgalka codsiyada kale ka Google
Fursadaha Wide ee daabacaadan
Noocyada xiriirrada by category
Kartida aad u economize gaadiidka
Google+ Software la xiriira:
English, Українська, Deutsch, Русский... Avira AntiVir 4.3